International Alanya Cycling Festival Nkwadebe Amalite | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region07 AntalyaEmeme Alanya International nke Egwuregwu
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, Mediterranean Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
mba a na-eme ememme ịgba bọl alanya bidoro
Nkwadebe maka ememme International Alanya Bicycle, nke a ga-eme nke ugboro abụọ n'afọ a, ebidola. Ememme a, nke a na-eme na nke mbụ na Alanya n’afọ gara aga, ga-emeghekwara ndị hụrụ keke anyị n’anya ọzọ. N'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe dị njọ n'afọ gara aga, a na-atụ anya na 24 ga-enwekwu ndị bịara ihe omume ahụ, nke ndị 200 na-aga n'obodo ahụ na-aga.
One of Turkey kasị mkpa njem emmepe nke Alanya, na egwuregwu na-aga n'ihu na-egosi ihe dị iche. N'afọ gara aga site na nkwado nke Obodo Alanya Festivall.com.t bụ A ga-eme 27-29 na Kestel na Septemba.
AKISTKỌ AK ANDKỌ AHA NA NB ALR AL ALBYAR AT ALANYA AKA NA-AKPATA
Na nkwupụta ahụ, a ga-eme ka ọmarịcha akụkọ ihe mere eme na mma nke Alanya pụta ìhè; n’afọ gara aga, ndị sonyere ahụ nwere mmasị na Kızılkule, Tersane na Dimçayı.
E mepere ihe ndekọ na-anọchi anya Alanya ịbụ mpaghara maka ụbọchị 82 tupu ememme ahụ.
27 N'oge ememme ahụ, nke ga-amalite na Fraịde na Septemba, ndị sonyere ga-aga ụkwụ n'okporo ụzọ ọzọ kwa ụbọchị. 11: 00, nke ga-amalite na Sọnde, ga-akwụsị n'ihu Kızılkule, nke ga-amalite site na Kestel.
2. Ememe International Alanya Bicycle Bido
Adıyaman nke na-agba ọsọ ụgbọ oloko dị elu malitere
Karaman Logistics Center amalite Preparations
10. Congress High Speed ​​Speed ​​Railway Congress…
Oge oyi na Ankara Metropolitan Ike Fleet…
Ime njem oyi na okporo ụzọ okporo ụzọ
3 ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Sochie nkwadebe niile…
Uygun: 'Nrụpụta Maka ineszọ Okporo Newzọ Ọhụụ'
6 na Mersin. Ememe Caretta Bike Amalite
Akpa Alanya Akdag Emere Ememe
Erciyes FESTA 2200 Bike Festival Na-amalite
ABB na Nobel Media kwupụtara mmekọrịta ụwa